I-iPad Pro 11 2021 ye-3rd Generation Case Funda ngePensile yokubamba ipenisi ye-iPad Pro 11 2020 2018
Ukuhambelana Eli tyala liyahambelana nePad Pro Pro 11 2021 3rd Generation, kwaye zombini iPad pro 11 2nd generation 2020, ipad pro 11 2018. iPad pro 11 2nd generation 2020 Model: A2228, A2068, A2230, A2231 iPad pro 11 2018 Model: A2013, Iimpawu zeMveliso ze-A1934, A1980, A1979: Ipensile eyakhelweyo eyakhelwe ngaphakathi Iyahambelana neepensile ezahlukeneyo kunye nePensile ye-1/2 yesizukulwane kunye nezixhobo. Ipensile eyakhiweyo inika indawo ekhuselekileyo yokugcina indawo yokugcina ipensile yakho. Xhasa iapile yakho ...
Kwi-Samsung galaxy tab ye-A7 lite 8.7 intshi 2021 yeTafile yeTafile yeCwecwe leMagnetic Slim Folio Isikhumba
Ukuhambelana ngokugqibeleleyo Eli tyala liyahambelana ne-Samsung Galaxy Tab A7 8.7 "(2021) Imodeli yethebhulethi SM-T220 / T225. Ukufikelela kuwo onke amanqaku kunye nolawulo lwethebhu A7 Lite 8.7. Ngekhe isebenze kwi-2020 Version Tab A 8.4 okanye nasiphi na esinye isixhobo semodeli. I-Slim kunye ne-Lightweight Super slim kunye nobunzima bokuyila umva onzima wongeza ubuncinci ngelixa unika i-Galaxy Tab A7 Lite 8.7 ukhuseleko olukhulu. Ukuma oku-Trifold Ityala le-A7 Lite libonelela ngendawo yokuma efanelekileyo yokubukela iimovie okanye typi ...
UKHUSELEKO olupheleleyo Gcina umphambili kunye nomva kwithebhulethi yakho ukhuselekile kwizikhafu, imikrwelo, kunye nokuchitheka. Igobolondo elingemuva ligcina ngokukhuselekileyo ithebhulethi yakho kwityala elincinci kunye nelilula eligcina iikona zikhuselekile. Ngoku itafile yakho INGENZA NJENGE-LAPTOP Yonwabele iiyure zokuthayipha ngokukhululekileyo, ubhetyebhetye kwizitshixo zesissor kunye neetshipsi ezikumgangatho ophezulu, ukuze izandla zakho zingaziva zidiniwe. Uhambo oluphambili lwe-2 mm lubonelela ngobunzulu obufanelekileyo besantya kunye nentuthuzelo. TYPE KWIDESKI YAKHO OKANYE I-LAP YAKHO OKANYE I-CAFE STORE Vula nje ityala ...
NGOKU ITafile YAKHO NJENGE-LAPTOP Ukuchwetheza kamnandi enkosi kumaqhosha esisi kunye neetshipsi ezikumgangatho ophezulu, ukuze izandla zakho zingaziva zidiniwe. Uhambo oluphambili yi-2 mm, ebonelela ngobunzulu obugqibeleleyo besantya kunye nentuthuzelo. YIMA UZIMA USEBENZE NGOKULULA ngee-anti-skip grooves, ithebhulethi yakho itshixiwe kwindawo efanelekileyo yokuchwetheza kwaye ihlala ihleli nkqi naxa uchwetheza kwiindawo ezingalinganiyo ezinjengethanga lakho. Ke unokuvula nje ityala, kwaye uqale umsebenzi wakho kwangoko. UYILO LWEMANGETIKI Eyakhelwe ngaphakathi kwiimagnethi ezinamandla, ...
Ityala elinamandla leMagneti ye-iPad yomoya i-4 10.9 intshi ye-2020 ye-Ultra Slim Cover
Yenzelwe i-iPad Air 4th Generation 10.9 Inch 2020 (Inombolo yemodeli: A2072 / A2316 / A2324 / A2325). Ayihambelani nezinye izixhobo. I-SLEEK ONE-PIECE DESIGN KUNYE NAMAGNETIKI NGAMAGNETICALL Isimbozo semagnethi esingasemva siyazincamathisela ngokuqinileyo kwi-iPad kwaye siqinisekisa ukulunga okukhuselekileyo, khusela i-iPad yakho ekukrwemeni nasemonakalisweni wemihla ngemihla. I-2 MAGNETIC STAND MOODS Uyilo olupheleleyo lokumiliselwa kwemagneti luphawu lokuma kokuma, okuzisa ...
UMDIBANO WEPENCIL HOLDER PERFECT COMPINATION Uyilelwe ukusebenza ngePensile, ukuze ubhale amanqaku ngesandla, imizobo yomzobo, okanye uphawule amaxwebhu ngokuthe ngqo kwi-iPad. Kwaye indawo yokubamba eyakhelweyo igcina ipeyinti yakho ukuze ihlale ikhona xa uyifuna. UKUQHUBA KAKHULU KUNYE NOLAWULO LWE-TRACKPAD Sebenza ngokuchaneka kwendlela yokulandela umkhondo kwii -apps ezinje ngenqaku, iphepha, itafile yamanani kunye nenqaku eliphambili. Uyakwazi ukuqaqambisa iiseli zespredishithi, ukope amagama, kwaye uhlele ii-imeyile ngokulula. Khawulezisa ukuvelisa kwakho ngezandla ezininzi zomnwe ...
Icala lokuma elincinci elincinci le-ipad mini 6 ye-Smart yesikhumba semoto ye-ipad mini 2021
Ityala leMagnetic ngebhodi yezitshixo edityanisiweyo ye-ipad yomoya 4 10.9 intshi 2020 ye-iPad yomoya 4 10.9inch 2020
IBHODI YEBHODI YEMAGICI Le meko yebhodi yezitshixo idibanisa iqokobhe le-magneitc eyothusayo kunye ne-trackpad echanekileyo ngekhibhodi enobungakanani obupheleleyo be-iPad yakho. Iqokobhe elothusayo lithengiswa ngokufihlakeleyo kwiqweqwe, libonelela ngokhuseleko kabini. Inkxaso yokuthinta iphedi epheleleyo iguqula i-iPad yakho ibe ngumatshini wokuvelisa ukusebenza kwiispredishithi kunye namaxwebhu, isixhobo esomeleleyo sokufunda kwiiklasi ezikude, nangaphezulu-amathuba anokuphela. UMBANE WOKUSUSA IMISEBENZI YOKUSUSWA KOKUTSHINTSHWA KWE-SHELL YOKWAKHELELEYO ...
Amaqhosha ajikelezayo ikhibhodi yebluetooth ye-ipad ye-Samsung Lenovo Huawei ithebhulethi enephedi yokuchukumisa
Uhlobo olutsha lwebhodi yezitshixo enamaqhosha angama-78units ajikelezayo, chukumisa imvakalelo elungileyo kwaye kamnandi. Yonwabela intuthuzelo kunye nokulula kokuchwetheza kwidesktop kwi-smartphone nakwi-tablet yakho. I-Ultra-Portable Yikhibhodi ephathekayo ephathekayo. Uyilo lwayo olucekeceke nolukhanyayo likuvumela ukuba uhambe nayo naphi na, nangaliphi na ixesha. Kulula ukuyiphatha ekhayeni lakho ngokuchwetheza okuqhelekileyo nakweliphi na igumbi, ukhuphele eofisini yakho, ikhefi kunye nenqwelomoya, thwala nje phakathi kwamaphephancwadi akho, ngaphakathi kwebhegi yakho yesandla. Iperi yeBluetooth elula ...
Ityala leBHOXX Nova3 umbala weNova 3 Nova 2 7.8 intshi enesiphatho somsizi wepenisi
Ukusebenza kwetyala lokuma kwesikhumba Eli tyala lidibanisa umtya wesandla, ipensile kunye nokuma kwebhola. Ibambe isithethi sakho sime ngokuzinzileyo. Sikhulule isandla sakho xa ufunda, kunye nokusela ikofu. Ipenisi yokubamba iphethe usiba lwakho xa ungayisebenzisi. Uyilo lwebhanti yesandla Ngomtya obambekayo wesandla / isiphatho sesandla, ikuvumela ukuba ubambe umntu ofundayo ngesandla esinye.Ibhanti e-elastic ikhululekile kwaye ilungele eyakho nezinye izandla. Ukuma okuzinzileyo ukukhaba simahla Isandla sakho .Ngokuma kokukhaba, wena ufundayo ume ngokuqinileyo ...